Xeeladaha Mawduuca Habboon ee CMO-yada si loo yareeyo Wasakhowga Dijital ah | Martech Zone
Waa in ay kaa naxdo, laga yaabee xitaa in ay kaa xanaaqdo, si aad taas u ogaato 60-70% ee suuqgeynayaasha nuxurka ayaa abuura tagaa aan la isticmaalin. Kaliya maahan inay tani si cajiib ah u khasaarinayso, waxay la macno tahay in kooxdaadu aanay si xeeladaysan u daabacin ama u qaybin macluumaadka, iska daa in ay shakhsiyeeyaan macluumaadkaas waayo-aragnimada macmiilka.
Fikradda ah content modular maaha mid cusub - wali waxay u jirtaa qaab fikradeed halkii ay ka ahaan lahayd mid la taaban karo oo ururo badan leh. Mid ka mid ah sababtu waa fikirka - isbeddelka ururka ee loo baahan yahay in si dhab ah loo qaato - ta kale waa tignoolajiyada.
Nuxurka qaabaysan kaliya maaha xeelad keli ah, ma aha wax lagu daro qaab-shaqeedka wax-soo-saarka nuxurka ama habka maaraynta mashruuca si ay u noqoto mid hawl ku salaysan. Waxay u baahan tahay ka go'naan urureed si loo horumariyo habka maacuunta iyo kooxaha hal-abuurka ay maanta u shaqeeyaan.
Mawduuca qaabaysan, oo si sax ah loo sameeyay, ayaa awood u leh inuu beddelo dhammaan meertada nolosha oo dhan oo si weyn u dhimo raadkaaga nuxurka qashinka ah. Waxay ku wargelinaysaa oo ay wanaajisaa sida kooxahaagu:
Habbee, fikir, oo qorshee waxa ku jira
Abuur, Ururi, dib u isticmaal, oo isku xidh nuxurka
Naqshadeeye, qaabeeye, iyo nuxurka curate
Raad raac, oo bixi fikradaha, nuxurka iyo ololayaasha
Haddii tani ay u muuqato mid adag, tixgeli faa'iidooyinka.
Forrester wuxuu sheegay in ka faa'iidaysiga dib-u-isticmaalka nuxurka iyada oo loo marayo qaybo modular ah ay u ogolaato ganacsiyada inay ururiyaan caadooyinka - mid la gaaryeelay ama mid deegaan - khibradaha dhijitaalka ah oo aad uga dhakhso badan habka caadiga ah, qaabka toosan ee wax soo saarka iyo maaraynta. Maalmihii khibradaha ka kooban hal-iyo-lagu sameeyay way dhammaadeen, ama ugu yaraan waxay u baahan yihiin inay noqdaan. Mawduuca habaysan wuxuu caawiyaa fududaynta wada hadalka had iyo jeer socda, ee joogtada ah iyada oo loo marayo ka-qaybgalka nuxurka dhagaystayaashaada iyada oo awood u siinaysa kooxaha inay la shaqeeyaan qaybo gaar ah oo ka kooban nuxur iyo jaantusyo si ay isugu daraan oo ay dib ugu milmaan waaya-aragnimada gobolka ama kanaalka gaarka ah qayb yar oo ah wakhtiga ay dhaqan ahaan qaadanayso. .
Waxa intaa ka sii badan, waa nuxurka markaa joogsada inuu noqdo karti-iibiyaha iyo dardar-geliyaha ay tahay inuu noqdo. Xigasho Forrester mar kale
70% iibiyeyaasha iibka ah waxay ku qaataan inta u dhaxaysa hal ilaa 14 saacadood usbuuc kasta iyaga oo u habeynaya waxyaabaha ay iibsadaan… [halka] 77% suuqgeynayaasha B2B ay sidoo kale soo sheegaan caqabado waaweyn oo wadista isticmaalka nuxurka saxda ah ee dhagaystayaasha dibadda.
Qof faraxsan ma jiro. Dhanka kore:
Haddii shirkad weyn ay ku bixiso qiyaastii 10% dakhliga suuq-geynta, kharashyada nuxurku waa 20% ilaa 40% suuqgeyntu, iyo dib u isticmaalku waxa uu saameeyaa kaliya 10% ee nuxurka sannadkii, waxa horeba u jiray kayd malaayiin doolar ah.
CMO-yada, waxa ugu weyn ee ay ka walaacsan yihiin nuxurka waa:
Xawaaraha suuqa – Sideen uga faa’iidaysan karnaa fursadaha suuqa, ula jaanqaadi karnaa waxa hadda socda, laakiin sidoo kale udub dhexaad u ah marka ay dhacdo dhacdooyin lama filaan ah.
Yaraynta khatarta - hal-abuurku ma leeyahay dhammaan waxyaabaha horay loo ansixiyay ee ay u baahan yihiin inay diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan dib u eegista iyo ansixinta oo ay helaan astaanta, nuxurka u hoggaansan suuqa waqtiga? Waa maxay qiimaha sumcad xumada? Kaliya waxay qaadataa hal khibrad si aad u bedesho maskaxda malaayiin ( qoolley).
Iska yaree qashinka – Ma waxaad tahay wasakh dijitaal ah? Waa maxay muuqaalkaaga qashinkaaga marka loo eego waxyaabaha aan la isticmaalin? Ma waxaad weli raacaysaa qaab nololeed oo dheer, nuxur toosan?
Shakhsiyaynta la qiyaasi karo - Nidaamkeena ujeeddo ma loo dhisay si ay u taageeraan isu imaatinka aan toos ahayn ee waayo-aragnimada shakhsi ahaaneed ee ku salaysan dookhyada, taariikhda iibsiga, gobolka, ama luqadda? Ma awoodaa inaad si xeeladaysan u dhisto nuxurka si aad u isticmaasho wakhtiga kala duwan ee baahida - waxa adiga laguu sameeyay - laakiin sidoo kale hubi u hoggaansanaanta, summaynta, iyo xakamaynta iyo hubinta tayada guud ahaan meertada nolosha nuxurka iyada oo aan la helin dhib badan, geeddi-socod waqti-qaadasho ah?
Kalsoonida ku jirta kaydkaaga martech - Ma leedahay shuraakooyin tignoolajiyadeed oo xooggan iyo horyaal ganacsi? Iyo, sida muhiimka ah, xogtaadu miyay u dhaxaysaa qalabyadaada? Ma samaysay layliyo si aad u soo bandhigto tafaasiisha wasakhaysan oo ma samaysay meel loogu talagalay maaraynta kakanaanta iyo isbeddelka hay'adda ee loo baahan yahay si loo waafajiyo tignoolajiyada suuqgeynta iyo ganacsiga?
Waxaas oo dhan waxaa ka mid ah, Madaxa Suuqgeynta (Chief Marketing Officer)CMO) shaqadu waa inaad ka guurto astaantaada celceliska una guurto garaadka. Haddii aad ku guulaysato iyo haddii kaleba, sida aad u socoto, waxay si toos ah uga tarjumaysaa CMO laftooda - sida ay u maareeyeen raasamaal siyaasadeed, booskooda c-suite, awoodda ay u leeyihiin inay jaraan ama baabi'iyaan mashaariicda iyo fariimaha fashilmay, iyo dabcan qashinka, iyo sida dhammaan waxaas oo dhan loola socdo oo loo naqshadeeyay guusha kooxda iyo ganacsiga.
Kartida, muuqalka, iyo daah-furnaanta looga baahan yahay isbeddelka maskaxda ayaa ka baxsan wax-soo-saarka nuxurka iyo waayo-aragnimada dhijitaalka ah. Qaabkani waxa uu wadaa xeelado suuqgeyn ujeedo leh, ujeedo ujeedo leh iyo nuxur tayo sare leh iyadoo la adeegsanayo ilo yar, iyada oo dhammaan qaybaha loo dhisay si ay u taageeraan khibrad kasta, waxyaabahaaga yar ama blocks-ka habaysan, oo noqda kuwa xoog ku kordhiya si ay uga faa'iidaystaan ​​macluumaadkaaga ugu fiican si xad dhaaf ah dhammaan dhagaystayaashaada.
Adiga oo ka faa'ideysanaya nuxurka qaab-dhismeedka sidii kicinta isbeddelka, hab cusub oo shaqo, waxaad dejinaysaa wixii markii hore aan suurtogal ahayn in sumadaha waaweyni ay fuliyaan. Oo waxay ka sii gudubtaa miisaan saafi ah - waxaad sidoo kale ka caawinaysaa kooxahaaga inay noqdaan kuwo mustaqbalka diirada saaraya, waxaad kor u qaadaysaa hal-abuurkaaga si aad u yarayso gubasho iyo soo jiidasho urureed. Waxa aad qaadanaysaa mawqif aad xooga saarayso waxa ku jira sida badeecadaha iyo adeegyada aad iibinayso oo kale, ugu dambayntiina, waxa aad abuuraysaa go'aan aad ku xakamayso qashinka oo aad hubiso fariintaada, aragtidaada iyo aqoonsigaaga sumadda, ha samayn Inaad ku hoos gasho buuqa wasakhowga dhijitaalka ah.
Tags: aprimocmonuxurka nolosha meertadawax soo saarkamaamulka mashruuca contentistaraatiijiyada contentsocodka shaqadacontent modularxeeladaha nuxurka modulardib u soo celi mawduuca
Eray bixinta qoraalka: Laga bilaabo Apex ilaa Swash iyo Gadzook inta u dhaxaysa… Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato farta